स्वावलम्बन लघुवित्तको नाफा २३% ले बढ्यो, प्रति शेयर आम्दानी कति ? – Insurance Khabar
स्वावलम्बन लघुवित्तको नाफा २३% ले बढ्यो, प्रति शेयर आम्दानी कति ?
प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार ०८:४३
काठमाडौं । ६२ कारोड ८८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५\_७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको नाफा २३ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो ।
लघुवित्तले खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा पनि बृद्धि गरेको छ । लघुवित्तले २३ दशमलव १६ प्रतिशतले खुद व्याज आम्दानीमा बृद्धि गरेको छ भने संचालन मुनाफामा २३ दशमलव ०८ प्रतितशले बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै जगेडा कोषमा पनि ६० प्रतिशतले बृद्धि गरी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चिती गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५\_७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा लघुवित्तले ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सापटी लिएको छ । गत आर्थिक वर्षको १२ महिनाको अवधिसम्ममा संस्थाले ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरी १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिकोे तुलनामा बचतमा ३० प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो भने कर्जा प्रवाहमा ४१ प््रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६७ रुपैयाँ १९ पैसा छ । यस्तै, प्रतिसेयर नेटवर्थ गत वर्ष भन्दा ५ रुपैयाँ १६ पैसाले घटेर २७८ रुपैयाँ ८९ पैसामा आइपुगेको छ । संस्थाको खराब कर्जा ० दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।